Umgangatho ophezulu weChina wokuSebenza kweZithuthi Umenzi kunye noMthengisi | Daxin
Ubude bePlatform: 10m-26m
Uluhlu lwamandla: 200kg
Umthamo we Crane: 1000kg
Ixesha lewaranti yeenyanga ezili-12 kunye neenxalenye ezikhululekileyo zasimahla
Ukusebenza kweendawo eziphakamileyo zisebenzisa ikakhulu imisebenzi ephezulu njengombane, izibane ezitalatweni, ulawulo lukamasipala, iigadi, unxibelelwano, izikhululo zeenqwelo moya, ukwakhiwa kweenqanawa (ukulungiswa), ukuthuthwa, intengiso kunye nokufota. Ukubonelela ngenkxaso yokusebenza kweminye imimandla, inkampani yethu ikwanayo izithuthi ezizodwa yemisebenzi yokulwa umlilo. Iqonga lenqwelomoya linesikhululo sokumpompa ekumgangatho ophezulu esenza ukuba inkqubo yokuphakamisa izinze, kwaye kwangaxeshanye inesakhono esomeleleyo sokoyisa imiqobo. Ukuba unendawo encinci yokusebenza, sinenye enyeiimveliso ukukhetha kwi. Nceda undithumelele umbuzo ngokukhawuleza nje ukuba ukhethe izixhobo ezifanelekileyo, kwaye ndiza kukunika idatha eneenkcukacha.
Umbuzo: Ngaba kufanelekile ukujikeleza ingalo yokusonga ngexesha lokusebenza?
Iinkuphelostencils ephezulu yokuqhuba ilori ine-turntable enokujikeleza i-360 °, yamkele isakhiwo sokunciphisa i-turbine nge-lubrication kunye nemisebenzi yokuzivalela ngokwakho, kwaye isikhundla se-bolt sinokulungiswa ngokulula ukufikelela kwisiphumo esifunekayo.
Q: Ndingafunda njani ngakumbi malunga nedatha?
A: Ungacofa i-imeyile kwiphepha lasekhaya lemveliso ukuthumela i-imeyile ngokuthe ngqo kuthi, okanye ucofe u "Nxibelelana nathi" kwiwebhusayithi ukufumana ulwazi oluthe kratya, kwaye ukhethe indlela othanda ukunxibelelana nathi ngayo ngolwazi ngemveliso.
Q: Njani ngexabiso leemveliso zakho?
A: Umzi mveliso wethu useke imigca yemveliso emininzi, enokuqhuba imveliso esemgangathweni emikhulu ukunciphisa iindleko zethu zemveliso, ke ixabiso lethu liluncedo kakhulu.
Umbuzo: Ngaba umgangatho weemveliso zakho unokuthenjwa?
A: Iimveliso zethu zidlulisile ukuqinisekiswa kwe-EU, kwaye umgangatho unokuthenjwa ngokupheleleyo.
Umthengi wethu waseJamani unenkampani yakhe yokuqeshisa kwaye wathenga indawo yokuSebenza ePhakamileyo yokuHlawula. Ngokunxibelelana, usixelele ukuba ukuqeshisa iilori zomsebenzi wasemoyeni kuyathandwa kakhulu kuba kulunge kakhulu ukuya kwiindawo ezahlukeneyo zomsebenzi. Abathengi bayo bayasithanda esi sixhobo, kwaye wagqiba kwelokuba athenge esinye. Usixelele ukuba bahlala basebenzisa iimoto eziphakamileyo ukulungisa nokulungisa ezinye izakhiwo ezingaphandle. Xa ethenga iimveliso zethu kwakhona, sinezaphulelo kubahlobo bethu bakudala, ngethemba lokuba inkampani yakhe yokuqeshisa inokuthandwa ngabathengi abangakumbi nangakumbi.
Omnye wabathengi bethu eDubai uthenge iTrakhi yethu yomsebenzi weAerial ukuba isetyenziswe kwimoto yokunyusa iimoto ukuhambisa iimoto ezilahliweyo. Oko basebenzise le lori yomsebenzi, ngoku banendawo ethe kratya eyadini eshiyekileyo. Usebenzise esi sixhobo ukubeka iimoto esele zisetyenzisiwe. Ukuphakama kokubeka ngokucacileyo kuphezulu kakhulu kunangaphambili, kwaye nomsebenzi wabasebenzi bakhe ulula kakhulu. Sonwabe ngokwenene ukuva ukuba izixhobo zethu zibenza lula kakhulu.
Amandla ePlatform (kg)
Ujikelezo lwe-Angle (°)
360 zombini kunye nokuqhubekayo
Amandla okuloba (kg)
Itafile yokujikeleza / iqonga
Ukuthintela Ubunzima (kg)
Ubungakanani ngokubanzi (mm)
I-9380 × 2470 × 3800
I-CHINA V Imigangatho yokuPhuma
Isantya esiphezulu (km / h)
Asi Capacity (kg)
Ubude obungaphezulu (mm)
Ikhosi yeAngle (°)
Egqithileyo Itreyila yamahashe
Okulandelayo: Amagwebu Umlilo Ukulwa Iinkuphelostencils
Uzinzo 1.Good kwi H uhlobo outrigger kunye isuti nayiphi na indawo yokusebenza uhlobo.
Isikhululo sempompo esemgangathweni ophezulu siyayiphakamisa kwaye iwe ngokuzinzileyo.
Uyilo lwesikere se-Anti-pinch; eyona ndawo iphambili yokuqengqeleka yamkela uyilo lokuzithambisa olwandisa ixesha lokuphila.
I-4.Ixhotywe nge-block ye-elektroniki yolawulo lwebhloko yokufezekisa ukusebenza ngokulula.
5.Uxinzelelo lwevalve yokuthintela ukusebenza ngokugqithileyo; Ukuhamba kolawulo lwevalve kwenza isantya sokwehla silungelelaniswe.
I-6.Explosion-proof valve iyeka iqonga eliphantsi ngokukhawuleza xa kuqhuma umbhobho.
7.Up ukuya American standard ANSI / ASME kunye Europe standard EN1570
I-1, I-boom kunye nemilenze zenziwe nge-alloy ephantsi ye-Q345 profiles, ejikelezwe yi-weld, inkangeleko entle, amandla, amandla aphezulu;
2, H-uzinzo lomlenze, imilenze inokusebenza ngaxeshanye okanye ngokwahlukeneyo, ukusebenza ngokuguqukayo, kunokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo;
3, indlela yokuSlewing iyahlengahlengiswa, kulula ukuyilungisa;
I-4, indlela ejikelezayo yokujikeleza itafile ye-360 °, ukusetyenziswa kwe-worm gear izixhobo zokunciphisa izixhobo (kunye ne-self-lubricating and self-locking function), emva kokulungiswa kwakhona kunokuhlengahlengisa ngokulula indawo ye-bolt ukufezekisa umphumo owufunayo;
5, Ukusebenza kwemoto kusetyenziswa imowudi yolawulo lwevali yolawulo oludibeneyo, uyilo oluhle, ukusebenza okuzinzileyo, ukugcinwa ngokulula;
I-6, yehla kwaye unxibelelane nemoto, umsebenzi okhuselekileyo nothembekileyo;
I-7, Ukusebenza kwemoto ngevalve yokujija ukuphumeza isithembiso seSithembiso;
I-8, iqonga lomsebenzi lisebenza ngokulinganisa ngomatshini, lizinzile ngakumbi kwaye linokuthenjwa;
I-9, Turntable kunye nebhasikithi ngesiqalo kunye nokuyeka ukutshintsha, kulula ukusebenza, konga ipetroli
1. Iziqhushumbisi zokuqhushumba
2. Isalufu sevalufa
3. Ivaluva yokwehla okungxamisekileyo
4. Isixhobo sokukhusela ngaphezulu kokukhutshelwa.
5. Ivaluva yokwehla okungxamisekileyo
6. Isixhobo sokukhusela ngaphezulu kokukhutshelwa.
Imodeli efanelekileyo kakhulu iya kucetyiswa kuwe xa sisazi malunga nemfuneko yakho.
Ukuthunyelwa kungalungiswa ukusuka kwizibuko lethu ukuya kwizibuko oya kulo.
Ividiyo yesondlo iya kunikwa nje xa isikere esiziphakamisayo siphakamisa iqonga lokukunceda ulungise.
5.Iindawo zetraki zingathunyelwa kuwe ngokuchaza kwiintsuku ezi-7 ukuba ziyafuneka.
Ixabiso lentengiso yecage yenqwelomoya
Ixabiso leTraki yasemoyeni
Aerial Isebenza Truck truck
Ixabiso leBucket Truck
High Alritude Operation Iinkuphelostencils
Ixabiso eliphezulu leZithuthi eziPhezulu
Ixabiso leMoto yokuSebenza
Ixabiso Special Truck